ခလေးဆန်တဲ့ ပုံစံလေးနဲ့ ချစ်စရာကောင်းလွန်းနေတဲ့ သင်းရတီခင် - Tha Dinn Oo
ခလေးဆန်တဲ့ ပုံစံလေးနဲ့ ချစ်စရာကောင်းလွန်းနေတဲ့ သင်းရတီခင်
ယျလေးပဲ ဖွဈပါတယျ ယောကျြားလေး ပရိသတျတှရေဲ့ ဝနျးရံ အားပေးမှုရရှိထားတဲ့သူမကတော့ social media လောကမှာ နာမညျတဈလုံးနဲ့ ရပျတညျနသေူ တဈယောကျလညျး ဖွဈပါတယျ။
ချစ်မေမေ ရဲ့ အ လှ အပတွေကိုအမွေ ရထား လို့ မိခင် နဲ့ ချွတ်စွပ်တူပြီး အရမ်း ချစ်စရာကောင်း တဲ့ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း
ချစ်မေမေ ရဲ့ အ လှ အပတွေကိုအမွေ ရထား လို့ မိခင် နဲ့ ချွတ်စွပ်တူပြီး အရမ်း ချစ်စရာကောင်း တဲ့ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း ပရိ သတ်တွေချစ်ရတဲ့ အဆိုတော် ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းကတော့ အနုပညာအလုပ်တွေကို ဟိုးအရင်ကတည်း ကလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး သီချင်းဆိုတာပါအပြင် သရုပ်ဆောင်ပါတော်တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဝိုင်းစုက အခုချိန်မှာဆိုရင် လူကြီးလူငယ်မရွေးကြိုက်နှစ်သက်ကြတဲ့ တေးသံရှင် တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သူမသီချင်းတိုင်းကလည်း နားထောင်လို့ကောင်းပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်း ဝိုင်းစုက သီချင်းသစ်လေးတွေအတွက် ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်နော်။ ဝိုင်းစုရဲ့ချစ်သူအောင်လကလည်း တေးရေး၊တေးဆို တစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့် ချစ်သူလေးအတွက်လည်း ကိုယ်တိုင်သီချင်းတွေရေးပေးပါတယ်နော်။ဝိုင်းစုတို့ချစ်သူနှစ်ယောက်က စိတ်တူ၊ကိုယ်တူ၊ဝါသနာတူနဲ့ အရမ်းလိုက်ဖက်ညီကြတဲ့ စုံတွဲလေးပါ။ပရိသတ်တွေကတော့ ဝိုင်းစုတို့နှစ်ယောက်လုံးရဲ့သီချင်းတွေကိုလည်း အားပေးကြသလို သူတို့စုံတွဲလေး ကိုလည်း ချစ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဝိုင်းစုကတော့ ချစ်မွှေးပါတဲ့မျက်နှာလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး သဘောကောင်းဖော် ရွေတဲ့သူလေးပါနော်။ ဟိုးအရင်ကတည်းက ချစ်စရာကောင်းသူလေးဖြစ်ပြီး မျက်နှာဝိုင်းဝိုင်းလေးနဲ့မျက်လုံးလှလှလေးတွေကြောင့် အရုပ်မလေးနဲ့တောင်တူပါတယ်။ဝိုင်းစုက […]
မွနျမာနိုငျငံက အမြိုးသမီးတှအေားလုံး မငျးသမီးသငျဇာလို အတုအယောငျတှလေိုကျမလုပျကွဖို့ သတိပေးရေးစပျထားတဲ့ သီခငျြး
ရိုငျးတယျလို့မထငျပါနဲ့ မွနျမာနိုငျငံက အမြိုးသမီးတှအေားလုံး မငျးသမီးသငျဇာလို အတုအယောငျတှလေိုကျမလုပျကွဖို့ သတိပေးရေးစပျထားတဲ့ သီခငျြးကောငျးလေးတဈပုဒျပါ အမြိုးသမီးတှမှော ဖျောပွအပျတဲ့ အရာ (၅)မြိုးရှိပါတယျ ၁. မကျြနာ ၂. ဆံပငျ ၃. နာကပျ ၄. အဝတျအစား ၅. ဖိနပျ ဤ၅မြိုးကဖျောပွအပျတဲ့ ၅မြိုးပါ မဖျောပွအပျတဲ့အရာတှတေော့ ထညျ့မပွောတော့ပါဘူး အဲ့တော့ မွနျမာရငျကြေးမှု့ကို ထိနျးသိမျးပွီး နထေိုငျကွဖို့ ကြှနျတျောပွောခငျြပါတယျ ( စကိုငျးတိုငျးဒသေကွီး ရှဘေိုခရိုငျ ရဦေးမွို့နယျ နန်ဒရောငျခွညျ ပရဟိတမကျြမမွငျ ပညာသငျကြောငျး ) တေးရေး ကိုကွီးတငျ Ph: 09257124994 တေးဆို ငွိမျးခမျြးလငျး Ph:09264126082 crd Paing Soe Myanmar Music Zawgyi ရိုင်းတယ်​လို့မထင်​ပါနဲ့ မြန်​မာနိုင်​ငံက အမျိုးသမီး​တွေအားလုံး မင်းသမီး​သင်​ဇာလို […]
ဩဂုတ်(၉)ရက် တွင် ထွက် ရှိ မည့် (၁၀)တန်း အောင် စာရင်း ကို ကျောင်း များ တွင် မကြေငြာ ပဲ အွန် လိုင်း မှ ထုတ် ပြန်မည်
ဩဂုတ်(၉)ရက် တွင် ထွက် ရှိ မည့် (၁၀)တန်း အောင် စာရင်း ကို ကျောင်း များ တွင် မကြေငြာ ပဲ အွန် လိုင်း မှ ထုတ် ပြန်မည် (၁၀)တန်း အောင်စာရင်း(သို့)တက္ကသိုလ် ဝင်တန်း အောင်စာရင်းကို ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ဝဘ်ဆိုဒ်က တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှု့နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး မည်သည့် ကျောင်းများတွင်မှ ယခင်နှစ်များကဲ့သို့ စာရွက် ကပ်ကာကြေညာမည် မဟုတ်ကြောင်းသိရသည်။ လူအများနဲ့ ဆက်ဆံတဲ့ နေရာမှာ သင့်ကို လက်ခံဖို့ ချစ်ခင် ဖို့ ဆိုတာ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်- မလိုအပ်ဘူး ထင်ပြီး သင့် ရဲ့ဆက်ဆံပုံ ဆက်ဆံနည်း လွဲမှားသွားခဲ့ရင်တော့ သင် မိတ်ပျက်ပါပြီ- ဒါကြောင့် ဒီ ဗီဒီယိုလေးကိုသာ ကြည့်ဖြစ်အောင် ကြည့်လိုက်ပါ ယခုထွက်ရှိ […]
အမိုကျစား ခန်ဓာ ကိုယျကောကျကွောငျး အလှကို ပိုငျဆိုငျ ထားတဲ့ မျောဒယျလျ သငျးရတီခငျ